HTC kwụsịrị ịgbara ọhụrụ na smartphones, dị ka onye isi nke ụlọ ọrụ ahụ | Gam akporosis
HTC CEO kwetara na ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị ihe ọhụrụ na smartphones
Ọ maara nke ọma na nsogbu ugbu a nke HTC, ụlọ ọrụ na-enwetabeghị nsonaazụ ọma na ire nke smartphones ya ogologo oge. Taa ọ na - agba mbọ ịlanarị na ahịa jupụtara na narị narị ndị na - arụpụta ekwentị - ọkachasị ndị China - na - enye ego dịka Xiaomi dịka ọmụmaatụ.
Ndị ụlọ ọrụ Taiwanese nwere ọmarịcha ewu ewu na afọ ndị gara aga, mana nke a abụghị ikpe ọzọ. Ọ bụghị dịka ọ dị na mbụ ịhụ onye nwere akara HTC n'aka ha, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na e nweela ọtụtụ mbupụta nke ụdị ọhụrụ ahụ. Nsogbu nke butere ụlọ ọrụ a ruo ugbu a, o doro anya na ọ bụ n'ihi enweghị ihe ọhụụ ... ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ nke ahụ bụ ihe Yves Maitres, onye isi oche ọhụrụ ahụ na-ekwu.
Maitres, na N'ajụjụ ọnụ nke ọnụ ụzọ ahụ mere TechCrunch, toro ụlọ ọrụ ekwentị dị iche iche n'ajụjụ ọnụ ụbọchị ole na ole gara aga ma katọọ arụmọrụ na nlelị nke HTC n'afọ ndị na-adịbeghị anya. N'ezie, a chọghị nke ikpeazụ; N’amaghị ama, ụlọ ọrụ ahụ weere usoro nke ọ na-enweghị ike ịpụ, n’agbanyeghi mbọ ọ mere. Ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na nke a, ka oge na-aga, ha na-agbanwe na ụdị ndị ọzọ bara uru na onyinye ndị ka mma.
HTC gbalịsiri ike ịnọ na mmiri n'oge ahụ. Na nkeji nke abụọ nke 2019 ọ debara aha a nke ise na-aga n'ihu kwa ọnwa. Na mgbakwunye, afọ gara aga ọ chụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị ọrụ ya. N'ikwu okwu banyere oke ahịa ya, na 2011, HTC nwere oke ahịa nke ihe dịka 11%, ebe na oge ugbu a aha ya ka nọ na ngalaba "ọzọ" n'ọtụtụ akụkọ.
"HTC akwụsịla ọhụrụ na smartphone ngwaike"Onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru. “Ndị dị ka Apple, dịka Samsung na, na nso nso a, Huawei, arụgoro ọrụ dị ịtụnanya na itinye ego na ngwaike ha. Anyị emeghị, n'ihi na anyị etinyela ego na ntinye ọhụụ nke eziokwu. Mgbe m bụ nwata, mmadụ gwara m, sị: 'I me ihe ziri ezi n'oge na-ekwesịghị ekwesị bụ ihe ọjọọ ma imehie ihe n'oge kwesịrị ekwesị.' Echere m na anyị ziri ezi n'oge na-ezighi ezi ma ugbu a, anyị kwesịrị ijide. Anyị mehiere oge. O siri ike ịtụ anya oge ahụ. HTC mehiere n'ihe gbasara usoro iheomume. Ọ bụ mmejọ siri ike ma anyị na-akwụ ụgwọ ya, mana anyị ka nwere ọtụtụ akụ na ụba, akụrụngwa na mpempe akwụkwọ na-adị m ka anyị na-agbake na mmejọ oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC CEO kwetara na ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị ihe ọhụrụ na smartphones
Ekwadoghi ngwa maka gam akporo, taa: iMusic Music Player for OS13
Nke a bụ ọnụahịa nke Oppo K5, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-esote